Kedu Mgbe I Kwesịrị Redgbanwegharị Logo Gị? | Martech Zone
Kedu Mgbe I Kwesịrị Redgbanwegharị Logo Gị?
Thursday, June 25, 2015 Thursday, June 25, 2015 Douglas Karr
Ndi otu anyi si Atụmatụ doro anya ebipụtala ọmarịcha akwụkwọ ozi a na ụfọdụ echiche gbasara ihe ị kwesịrị ịma maka ịdegharị akara, ihe kpatara ị ga - eji megharịa, ụfọdụ ịme ihe na ihe ị chọghị ime, ụfọdụ akara ngosi mmezigharị na ụfọdụ nzaghachi sitere na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ
atọ Anọ ihe mere ka redesign gị Logo
Njikọ Companylọ ọrụ - njikọta, nnweta, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-atụgharị anya ga-achọkarị akara ngosi ọhụụ iji gosipụta ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ.
Companylọ ọrụ ahụ na-eto karịa nke mbụ ya - maka ụlọ ọrụ na-agbasawanye onyinye ya, dị ka iwebata ngwaahịa ọhụrụ, ọrụ, wdg. Ịmegharị akara ngosi ha nwere ike ịbụ ụzọ dị irè iji gosipụta mgbanwe ụlọ ọrụ.
Mgbanwe ụlọ ọrụ - ụlọ ọrụ ndị gbarala gburugburu ogologo oge na nwere ike ịchọ akara ngosi.
Ọ ga-amasị m itinye ihe ọzọ! Mobile viewports na nnukwu nkọwa dijitalụ meziri nnọọ gbanwere otú e si ele gị logo. Gara bụ ụbọchị nke n'ịhụ na gị logo anya ọma na nwa na-acha ọcha na a faksị igwe.
N'oge a, inwe a favicon dị mkpa mana enwere ike ile ya naanị na pikselụ 16 site na 16pixels els ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume ile anya nke ọma. Ma ọ nwere ike ịga ogologo ruo na onyoonyo na ngosipụta retina na pọdels 227 kwa inch. Nke ahụ chọrọ ụfọdụ ọrụ imepụta mara mma iji nweta ya. Inweta uru nke ihe ntanye dị elu bụ ezigbo ihe kpatara m, n'echiche m, iji nweta akara ngosi ọhụụ!
Ọ bụrụ n’ịghapụtabeghị akara ngosi gị n’ime afọ ole na ole gara aga, akara ngosi gị nwere ike iyi onye toro eto anya maka onye ọ bụla na-eme nyocha ntanetị (nke bụ maka mmadụ niile!).
Tags: ngosipụtaihe ngosi logomegharia logologo imeghari ozi infographicredesign
Ha ezighi ezi… Not naghị Tweeting ezu